Markets sy Cointop: fampiharana 2 GUI sy CLI hanaraha-maso ny Cryptocurrencies | Avy amin'ny Linux
Androany, hiditra ny sehatry ny Tontolo DeFi. Ary noho izany antony izany dia hiresaka tetikasa 2 mahaliana sy tena ilaina izahay fampiharana maimaimpoana sy misokatra.
Fampiharana 2, iray amin'ireo Desktop (GUI) ary ny iray amin'ireo Terminal (CLI) for Rafitra miasa GNU / Linux noforonina ho an'ireo mpampiasa mazoto ny Tontolo DeFi, manokana ireo izay isan'andro isan'andro mpivarotra (mivarotra izy ireo) samy hafa Cryptocurrencies ho an'ny orinasa. Ary nantsoina ireo "Tsena sy Cointop".
Tsara ny manasongadina, indrindra ho an'ireo Linuxers liana na liana amin'ny Cryptocurrencies, fa raha tsy, tsy nahatsikaritra na te hiverina hiverina hijery / hizara ny sasany amin'ireo famoahana teo aloha mifandraika amin'ny Tontolo DeFi, hamela rohy mahasoa ho azy ireo izahay eto ambany:
"Amin'ity fahatelo ity, ary amin'izao fotoana izao ny famoahana farany, momba ny Wallet Cryptocurrency azo ampidinina amin'ny rafitra miasa malalaka sy misokatra mifototra amin'ny GNU / Linux, dia hiresaka momba ny "Dash Core Wallet" ary avy eo, momba ny sasany hafa fantatra fa be mpampiasa sy be mpampiasa. .”Dash Core Wallet: Mametraka sy mampiasa ny Dash Wallet Ary maro hafa!
"Amin'ny ankapobeny, "Adamant" dia fampiharana fandefasan-kafatra mailaka misokatra mifototra amin'ny teknolojia blockchain, izay miasa ho kitapom-bola Crypto sy Cryptocurrency Exchange System (Exchange)."
"Ny DeFi dia fironana ara-teknolojia misokatra izay miseho manodidina ny teknolojia blockchain farany teo amin'ny tontolon'ny ara-bola, ary miha matanjaka isan'andro isan'andro noho ny fiakaran'ny Cryptocurrencies, ary ny filàna ny rafitra fandoavam-bola nomerika sy ny fifanakalozana ara-bola azo itokisana, haingana kokoa, milamina sy mitokana."
1 Markets sy Cointop: Crypto avy amin'ny Desktop sy Terminal
1.1 Inona ny Markets?
1.1.2 Misintona, mametraka, mampiasa ary pikantsary
1.2 Inona ny Cointop?
1.2.2 Misintona, mametraka, mampiasa ary pikantsary
Markets sy Cointop: Crypto avy amin'ny Desktop sy Terminal
Inona ny Markets?
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialy ny fangatahana dia:
"Fampiharana izay miasa ho toy ny tracker ho an'ny tahiry, vola ary crypto."
Noho izany dia manana ireto toetra sy fampiasa manaraka ireto izy ireo, izay ahafahan'ny olona mijery mora foana ny angon-drakitra ilaina ara-bola, mba haharaka ny tsena ary tsy hanadino ny fotoana mety hampiasam-bola:
Mora mamorona sy manara-maso portfolio manokana an'ny zavatra ara-bola (tahiry, entana ary indeks), fananana (vola) ary fananana crypto (crypto) hizaha.
Mifanaraka amin'ny finday finday Linux (Libraryem5, PinePhone)
Sokafy izay marika ao amin'ny Yahoo Finance raha te hahalala antsipiriany bebe kokoa.
Amboary ny faharetan'ny fanavaozana ireo zavatra mifandraika amin'ilay portfolio namboarina.
Fomba maizimaizina hanohana ny fahitana ny atiny.
tsena dia fampiharana rindrambaiko CIRCLE GNOME, noho izany, misy amin'ny voalohany izy io amin'ny Format ".AppImage". Ka ny fombany Misintona sy mametraka miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Aorian'izany dia azo tanterahina mora foana amin'ny alàlan'ny Menio fampiharana ary ampifanaraho ny entana haseho / esorina, amin'ny alàlan'ny tsotra sy mivantana menio ambony.
Raha mila fanazavana fanampiny momba tsena afaka mitsidika ny tranokala ao amin'ny GitHub.
Inona ny Cointop?
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub ny fangatahana dia:
"Fampiharana fifanakalozana mpampiasa (CLI) mifamadika haingana sy maivana amin'ny fizahana crypto."
Noho izany dia manana ireto toetra sy fampiasa manaraka ireto izy ireo, izay manamora ny fanaraha-maso ny tsenan'ny crypto an-tserasera amin'ny terminal:
Manolotra fanaraha-maso mety sy fanaraha-maso ny statistikan'ny cryptocurrency amin'ny fotoana tena izy.
Izy io dia manana interface tsara avy amin'ny aingam-panahy htop miaraka amin'ireo bokotra hitsin-dàlana avy amin'ny vim.
Koa satria, "Cointop" Izy io amin'ny ankapobeny dia script, rehefa alaina sy esorina dia mila mihazakazaka avy eo amin'ny folder (lalana) misy azy miaraka amin'ity baiko manaraka ity ianao:
Aorian'izany dia afaka mahita ny anao ianao Miasa ny interface CLI tsy misy olana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba "Cointop" afaka mitsidika ny tranokala ofisialy, azy manokana fizarana antontan-taratasy.
naoty: Amin'ny fandinihako tranga, hatramin'ny Operating System ampiasaina, dia MilagrOS (Respin miorina amin'ny MX Linux) ny farany stable version 1.6.5 Tsy novonoina izy io noho ny olan'ny Tranomboky GLIBC_2.32. Rehefa novonoina dia natsipiny ity lesoka manaraka aseho eto ambany ity, raha ny azy dikan taloha 1.5.4 nihazakazaka tsy nisy olana.
Farany, ho an'ireo izay mampiasa ny Tontolo iainana Desktop GNOME, ny applet'ny antsoina hoe vidin'ny vola madinika, mety ho safidy hafa tsara hafa araho ny tsenan'ny crypto.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Markets y Cointop», 2 mahaliana ary tena ilaina Rindrambaiko Desktop (GUI) sy Terminal (CLI) noforonina ho an'ireo mpampiasa mazoto ny Tontolo DeFi, manokana ireo izay isan'andro isan'andro mpivarotra (mivarotra izy ireo) samy hafa Cryptocurrencies amin'ny orinasa; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Markets sy Cointop: fampiharana 2 GUI sy CLI hanaraha-maso ny Cryptocurrencies